Fanovana fandaharana ho an'ny mpamorona sary | Famoronana an-tserasera
Fanovana fandaharana ho an'ny mpamorona sary
Jorge Neira | | Fitaovana famolavolana, sary
Ny programa malaza indrindra ampiasaina hanehoana sary dia ny Adobe Illustrator. Ity dia singa iray izay mampiasa sary sary miaraka amin'ny singa matematika mba hamoronana loko, tsipika ary endrika.
Izany dia manome antsika fotoana lehibe eo amin'ny fanatanterahana tetikasa araka ny refy tianao, mamela anao koa izy io manaova endrika amin'ny mizana goavambe toy ny tranga amin'ny takelaka fisoratana anarana, na dia ny tsara indrindra amin'izany rehetra izany dia tsy misy karazana pixelation any am-piasana.
1 Ny programa fanovana tsara indrindra ho an'ny mpamorona sary
2 Fandaharana fanovana maimaimpoana sy karama
Ny programa fanovana tsara indrindra ho an'ny mpamorona sary
Ny mampiavaka an'io fitaovana io dia ny sary sary izay manome ohatra sy manaingo, mamela hanao sary, logo, afisy ary singa maro ataon'ny mpamorona sary. Saingy tokony holazaina fa fitaovana voaloa ity ary vola be no vidiny ka maro ny mpamorona mitady safidy hafa, ny tena izy dia betsaka ny amin'ny internet fitaovana maimaimpoana afaka manampy antsika koa izany ary ireo maimaimpoana dia manampy antsika hitahiry vola be.
Inkscape safidy tsara izany dia mitovy amin'ny Illustrator Ary ny zavatra tsara indrindra dia maimaim-poana, ity fitaovana ity dia manome antsika sary sokajin-tsary amin'ny karazany rehetra, fitaovana ampiasain'ny olona matihanina, mpanao sary ary mpamorona sary.
Inkscape Izy io dia manana safidy manokana hamoronana fandaminana sy lamina, mamela antsika hanao famoronana mandroso ihany koa izy io, manana sivana sy famenoana sary maro izy. Saika ny safidy Illustrator rehetra dia hita ao amin'ny Inkscape.
Raha mahay computing ianao, dia azonao atao ny mampiditra karazana rindrambaiko hafa amin'ity rafitra ity, misy ny tsy manaiky an'io safidy io satria mandeha miadana izy io, saingy ity marina miankina amin'ny système d'exploitation izay ampiasainao.
Etsy ankilany, azonao atao koa ny mampiasa fitaovana nifty antsoina hoe SVG, tena tsotra sy mora ampiasaina izy io, satria azo ampiarahina amin'ny Google Chrome izy io, manana fitaovana fototra toy ny kapoka, penina samy hafa ny hateviny, fiolahana b-ézier, sosona ary zavatra maro hafa.
Inona no mahatonga an'io ny ankafizin'ny maro dia hoe tena mora ampiasaina ary mora ianarana, noho izany dia azon'ny karazan'olona rehetra ampiasaina izy io.
Tsy azonay natao ny nanonona fitaovana iray izay saika ny safidin'ny Illustrator rehetra ary tsotra dia tsotra, ity GravitNy tsara indrindra dia hoe ao anaty browser no misy azy, tsy ilaina ny fampidinana hanombohana ny fampiasana azy ary ity fitaovana ity dia azo ampiasaina amin'ny karazana fitaovana raha mbola manana fidirana amin'ny Internet ianao.
Ny hany zavatra tokony hataonao hanombohana miasa ao amin'ny Gravit dia ny fisoratana anarana, ankoatr'izay amporisihina hampiasa azy amin'ny Chrome, fa azonao ampiasaina amin'ny Safari sy Firefox ihany koa. Izy io dia manana fitaovana izay matetika ampiasain'ny mpamolavola rehetra, toy ny ellipses, sary, sivana, sosona, triangles, tsipika, tapaka, penina miloko isan-karazany, ary endrika manokana hafa.
ihany koa sary azo aondrana amin'ny PNG, JPG ary SVG.
Fandaharana fanovana maimaimpoana sy karama
Azonao atao koa ny misafidy VECTR, satria fitaovana azonao ampiasaina a rindrambaiko na amin'ny maha-rindrambaiko amin'ny Internet. Ity dia programa maimaim-poana izay azo ampiasaina hanitsiana ireo sary noforoninao, azonao atao amin'ny birao na amin'ny navigateur ankehitriny, programa mora be sy mora ampiasaina ity.
Ny rindrambaiko famolavolana dia tena tsotra, tsy manana safidy betsaka ianao Adobe Illustrator, na dia manana fiasa toa ny sosona, lahatsoratra, endrika, sy ny toa izany aza izy. Safidy mety tsara io raha toa ianao ka vao manomboka ary manomboka satria afaka mamorona a sary tsotra tsy misy ezaka be.
Ity dia fitaovana maimaim-poana izay olona manomboka miasa amin'ity tontolon'ny graphic designNa inona na inona safidy safidinao, ireo fitaovana rehetra ireo dia tena ilaina amin'ny famolavolana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » sary » Fanovana fandaharana ho an'ny mpamorona sary
Ny zavatra tokony ho fantatrao momba ny "boky torolàlana momba ny orinasa"
Midira ho an'ny taranja 50% any Trazos_ ho an'ny mpamorona